Ny maha-zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ireo mpivarotra amin'ny hidin-trano | Martech Zone
Ny fandinihana ny mpivarotra sy ny CEO nandritra ny vanin-taona mafana dia nahita fa dimy isan-jato monja no tsy nahita zava-tsoa amin'ny fiainana ao amin'ny lockdown - ary tsy nisy olona na iray aza nilaza fa tsy nahalala zavatra iray izy ireo nandritra izany fotoana izany.
Ary amin'ny fahatsapana pent-up ny fangatahana hetsika ara-barotra aorian'ny fanidiana ny lohataona dia toy izany ihany koa.
Fa xPlora, masoivohom-barotra sy nomerika monina any Sofia, Bulgaria, ny fahaizana mizara rakitra sy endrika fananana hafa amin'ny mpiasa sy ny vina aman-draharaha.
Ny maha masoivoho nomerika, azo antoka ary fahazoana 24/7 fidirana amin'ny fananana hita maso no tena ilain'ny ekipanay. pCloud dia mifanaraka tanteraka amin'ny fepetra fiarovana napetrakay mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifanay eo an-toerana sy any ivelany.
Mampiasa ny ekipa xPlora izao pCloud, iray amin'ireo sehatra fitahirizan-drakitra sy tahiry fizarana rakitra haingana indrindra any Eropa. Miaraka amin'ireo mpanjifa iraisam-pirenena, nanome fanamby manokana ny fanidiana.
Saingy ahoana no tokony hizaran'ny ekipa marketing ny rakitra manan-danja - ary matetika lehibe - mba hiasa amin'ny fahaiza-manao faran'izay betsaka eto an-tany izay manohy manimba hatrany ny Covid-19? Misy fitsipika volamena telo hitazomana ny fitohizan'ny asa eo am-panaovana asa lavitra sy hybrid:
Ny fijanonana mifandray sy ny fiaraha-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miasa ao an-trano dia mety hanaporofo fa sarotra, ary ny zavatra indray mandeha tsotra toy ny fampisehoana antontan-taratasin'ny asa, dia nanjary asa sarotra kokoa. Ny fahaiza-miasa miaraka amin'ny antontan-taratasy, sary ary rakitra audio mora foana tahaka ny ataonao ao anatin'ny tontolon'ny birao no lakilen'ny fahombiazana.
Around 60% -n'ny vahoaka britanika no miasa an-trano hatramin'ny nanidiana ny coronavirus, miaraka amin'ny 26% manapa-kevitra ny hanohy hiasa ao an-trano indraindray, rehefa azo antoka izany. Na dia miverina amin'ny laoniny aza ny ara-dalàna, dia mbola ilaina ihany ny mifandray hatrany amin'ireo mpiara-miasa izay tsy ao amin'ny birao matetika ary manapa-kevitra ny hiasa an-trano indraindray. Zava-dehibe ny fananana fitaovana fiaraha-miasa mety arak'izay ilain'ny tsirairay.
Mifantoha amin'ny fiarovana ny rakitra
Zava-dehibe amin'ny fotoana tsy azo antoka toy izany ny fahatsapan'ny tsirairay ny filaminana rehefa miara-miasa amin'ny antontan-taratasy. Anisan'izany ny fanomezana toky ny mpanjifa sy ny mpiasa. Ny filaminana ara-tafika ihany no mamela ny tena fandriam-pahalemana sy fahatokiana, noho izany dia zava-dehibe ny anaovan'ny tompona orinasa sy ireo teknolojia vaovao ny entimodiny. amin'ny pCloud, tianay ihany koa ny handeha lavitra kokoa ary avelan'ireo mpampiasa hanapa-kevitra raha te hitahiry ny mombamomba azy ireo any Eropa na Etazonia izy ireo, ahafahan'izy ireo manamboatra izay toerana itahirizan'izy ireo arakaraka ny safidin'ny tena manokana.
Ny fanamorana ny fampiasana angamba no fangatahana lehibe indrindra ho an'ireo mpamatsy fitehirizana rahona. Ny tsy ilain'ny orinasa dia rafitra sy lamina hafa sarotra ianarana. Ny vahaolana mety amin'ny talenta rehetra dia manan-danja indrindra.
Voalaza mialoha fa amin'ny faran'ny taona 2020, 83% ny enta-mavesatra dia ho eo amin'ny rahona, manasongadina ihany ny maha-zava-dehibe ny fijanonana mifandray rehefa mizara hevitra sy mamolavola paikady marketing, ary mamorona tontolo iaraha-miasa. Ho an'ireo masoivohon'ny marketing, ny Covid-19 dia nanolotra fotoana iray ahazoana ny rafitra sy ny fizotrany mifanaraka amin'ny 'hoavin'ny asa'. Fotoana tsy azon'izy ireo atao tsy hita.
Midira ao amin'ny pCloud
Tags: rakitra fizaranafiaraha-miasa amin'ny marketingpcloudfiaraha-miasa lavitraasa an-tselikahery miasa lavitra
Tunio Zafer no tale jeneralin'ny pCloud AG - ilay orinasa mamolavola sy manome ny sehatra fitehirizana pCloud. Manana traikefa momba ny fitantanana sy ny marketing mihoatra ny 18 taona eo amin'ny sehatry ny haitao izy, ary nandray anjara tamina tetik'asa maro mahomby toa an'i MTelekom, Host.bg, Grabo.bg, Mobile Innovations JSC sy ny hafa. Amin'ny maha mpitarika sy mpitantana ny orinasa fitehirizana rahona azy, Tunio dia mampiroborobo ny fanavaozana amin'ny sehatra toy ny fiarovana sy ny fahombiazan'ny vidiny hampiatoana ireo mpampiasa. Tunio dia mamporisika ny fisainana mialoha amin'ny ekipany, miasa mba hisy fiantraikany lehibe amin'ny tsena IT mitombo haingana, ho an'ny olona sy ny orinasa.